Easy Japanese in Burmese - Lesson 28 | NHK WORLD RADIO JAPAN
NHK WORLD > လွယ်ကူလေ့လာဂျပန်စာ > မြန်မာဘာသာ Top > သင်ခန်းစာခေါင်းစဉ်များ > သင်ခန်းစာ 28
Shizuoka (ရှီဇူအိုကာ) ကကြိုဆိုပါတယ်
အန်းနာဟာ ဆာ့ခူရာနဲ့အတူ ရှီဇူအိုကာမြို့ကိုသွားခဲ့ပါတယ်။ ဘူတာရုံမှာဆာ့ခူရာရဲ့မောင်ဝမ်းကွဲ ခဲန်းတာက သူတို့ကိုလာကြိုခဲ့ပါတယ်။
သင်ခန်းစာ 28 ၁ဝ မိနစ်
သင်ခန်းစာကို download လုပ်ယူရန် 28
SHIZUOKA E YÔKOSO
こちらは、いとこの健太くん。 ဒါက ဝမ်းကွဲမောင်လေး ခဲန်းတာပါ။
KOCHIRA WA, ITOKO NO KENTA-KUN.
ဒါက ဝမ်းကွဲမောင်လေး ခဲန်းတာပါ။
静岡へようこそ。 ရှီဇုအိုက ကကြိုဆိုပါတယ်။
SHIZUOKA E YÔKOSO.
彼はカメラに詳しいから、いろいろきいてね。 သူက ကင်မရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး နှံ့နှံ့စပ်စပ်သိ တာကြောင့် အမျိုးမျိုးမေး ကြည့်နော်။
KARE WA KAMERA NI KUWASHII KARA, IROIRO KIITE NE.
သူက ကင်မရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး နှံ့နှံ့စပ်စပ်သိ တာကြောင့် အမျိုးမျိုးမေး ကြည့်နော်။
どうぞよろしくお願いします。 ကျေးဇူးပြုပြီး ကူညီပါဦး။
（アンナちゃん、かわいいなあ） အဲန်းနာ ကချစ်စရာ ကောင်းလိုက်တာ။
(ANNA-CHAN, KAWAII NÂ.)
အဲန်းနာ ကချစ်စရာ ကောင်းလိုက်တာ။
E ဆိုတာက လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုရဲ့ ဦးတည်ရာကိုညွှန်ပြတဲ့ ဝိဘတ်ပါ။ YÔKOSO ဆိုတာက ကြိုဆိုပါတယ်။ ဥပမာ NIHON E YÔKOSO. ဂျပန်ကကြိုဆိုပါတယ်။
NIဆိုတဲ့ဝိဘတ်က သူကဘာကိုဗဟုသုတရှိတာလဲဆိုတာကို ညွှန်ပြတယ်။
ဥပမာ-KENTA WA KAMERA NI KUWASHII.
ခဲန်းတ က ကင်မရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး နှံ့နှံ့စပ်စပ်သိတယ်။
KARA နဲ့ NODE ရဲ့ ခြားနားချက်
KARA နဲ့ NODE၂ခုလုံးကိုအကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုကိုပေးဖို့အတွက် သုံးပါတယ်။ ဥပမာ - KAWAII (ချစ်စရာကောင်းသော) ဆိုတဲ့ နာမဝိသေသနစကားလုံးက အကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုရင် KAWAII KARA ဒါမှမဟုတ် KAWAII NODE လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။
ရှိဇူအိုကာအကြောင်းပြောလိုက်ရင် ပထမဦးဆုံးတွေးမိလိုက်တာက ဖူဂျီတောင်ပါပဲ။ ဖူဂျီတောင်က ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်စာရင်း ဝင်ထားပါတယ်။ ဖူဂျီတောင်က အလှဆုံး ရှုခင်းနေရာတွေ အကြောင်းကို ခဲန်းတကို မေးကြည့်မယ်။
သင်ခန်းစာ 27 ဘယ်သူက လက်ထပ်မှာလဲ